दुखाइ कम गर्ने पेनकिलरको धेरै सेवनले मुटु ड्यामेजको सम्भावना ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
दुखाइ कम गर्ने पेनकिलरको धेरै सेवनले मुटु ड्यामेजको सम्भावना !
प्रकाशित मिति १० चैत्र २०७५, आईतवार २२:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । संखुवासभाका सुदीप श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) अहिले ३२ वर्षका भए । २३ वर्षको छँदा उनलाई जिउ र टाउको दुख्ने समस्या देखियो । केही दिनको पर्खाइमा ठीक नभएपछि तुम्लिङटारस्थित मनकामना पोलिक्लिनिकमा गए । स्वास्थ्यकर्मीले पेनकिलर प्रयोग गर्न सल्लाह दिए । दुखाइ कम गर्ने नाममा धेरै पेनकिलर सेवन गर्दा अहिले उनको मिर्गौलामा समस्या देखिएको छ ।
मुगुकी ५३ वर्षीया रश्मि रोका (नाम परिवर्तन)लाई १५ वर्षअघि जोर्नी दुख्ने समस्या देखियो । अन्य उपचारले ठीक नभएपछि नियमित पेनकिलर प्रयोग गर्न थालिन् । केही वर्षपछि उनलाई रगत नै बान्ता हुन थाल्यो । उपचारका लागि काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा आइन् । डां दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार स्वास्थ्य जाँच गर्दा महिलाको मिर्गौला फेल भएको देखियो । अहिले नियमित डायलासिस गरिरहेकी छिन् ।
धादिङका जुडे कुमाल (नाम परिवर्तन)लाई १० वर्षदेखि उच्च रक्तचापको समस्या देखियो । ४३ वर्षका कुमाल प्रेसरका कारण टाउको दुखेपछि अहेवको सल्लाहमा नियमित पेनकिलर सेवन गर्न थाले । तर, पछिल्लो समय शरीर दुख्न थालेपछि उनी उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर आए । परीक्षण गर्दा उनको मुटु नै फेल हुने अवस्थामा पुगेको रिपोर्ट आएको डां दीपेन्द्र पाण्डेले बताए ।
नेपालमा रुघा लाग्दादेखि टाउको दुख्दासम्म राहतका लागि पेनकिलर नै सेवन गर्ने चलन बसेको छ । दुखाइको समस्यामा चिकित्सकले सजिलै पेनकिलर चलाइदिन्छन् र बिरामी तत्काल राहत अनुभव गर्दै खुसी हुन्छन् ।
पेनकिलरले दीर्घकालमा गम्भीर असर निम्त्याउनेमा कमै सर्वसाधारण जानकार छन्, चिकित्सक भने जानकार भएर पनि नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । अन्जानमै लामो समय पेनकिलर प्रयोग गर्दा कैयौँको मिर्गौला, मुटुलगायत भित्री अंग ड्यामेज भएका छन् ।
लहान । सिरहाको सुखिपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान राजकुमार यादवलाई आज बिहान रु पाँच हजार घुस लिएको…
रक्तअल्पतादेखि कब्जियतको औषधी- हरियो मकै, यस्ता छन् अन्य फाइदा
एजेन्सी । यो सिजन मकै पाउने सिजन हो । विशेषगरी अहिले सडक किनार मकै पोल्न र बेच्न मानिसहरु बसेका…
भारतमा आईपिएल नेपालमा सट्टेबाजी !
काठमाडौं । भारतमा इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) सुरु भएसँगै नेपालमा सट्टेबाजीको धन्दा चलाउने गिरोह पुनः सक्रिय भएको छ ।…
साप्ताहिक राशिफल: वैशाख २१ देखि २८ गतेसम्म
साताको शुरु आइतबारसम्म त्यति सन्तोषजनक छैन । छिमेकी–साथीभाइसँग विवाद, दुर्घटना, चोटपटक, रोगको भय, असफलता हुने देखिन्छ भने बाँकी सबै…
कक्षा ११ र १२ को परीक्षा केन्द्र निर्धारण: वैशाख १४ गतेदेखि परीक्षा
विद्यार्थीका लागि रोजगार आजको आवश्यकता 8 views